Raiamandreny mijoro: “Kihon-dalana ny fifidianana” | NewsMada
Raiamandreny mijoro: “Kihon-dalana ny fifidianana”
“Mety misy politika mandroritra ny Ceni. Lazainay hoe, aza manaiky hororitin’ny politika atsy na aroa, fa tanteraho ny andraikitra amin’ny maha vaomiera mikarakara fifidianana anareo.”, hoy ny filohan’ny fikambanana Raiamandreny mijoro avy amin’ny faritany Toliara, ny Dr Rasolondraibe Péri, teny Ankadivato, afakomaly. Mba ho vita tsara izany fifidianana izany, ka tsy hisy krizy mandritra sy aorian’ny fifidianana.
Fifidianana ny kihon-dalana misy antsika amin’izao fotoana izao, ary fitondrana fiaraha-mitantana no misy. Ampirisihina handray ny andraikiny izy. Tsy hozarain’ny politika samihafa ananany izany, fa hiombona amin’ny andraikitra nomena azy: ny fanatanterahana ny fifidianana.
Eo koa ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), mamoaka ny voka-pifidianana: mila ataony tsara izany amin’ny maha mpiandraikitra lalàmpanorenana azy. Ho an’ny mpitandro filaminana: ilaina ny hisian’ny filaminana tanteraka mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Mba hahazoan’ny vahoaka manatanteraka an-kalalahana ny fifidianana, tsy misy teritery.
Mandavantaona ny fanorenana ifotony
Efa eo hatramin’ny nijoroan’ny Repoblika malagasy ny fototra. Voatahiry ao anatin’ny saim-pirenena izany, araka ny fanazavany. Ny fototra niaingana sy iorenan’ny Repoblika amin’izany, ny fandriampahalemana sy ny fiadanana, ny firaisankina, ny fandresena. Eo ny fampandrosoana ny toekarena, fikoloana ny tontolo, fikajiana ny soatoavina sy ny maha olona manontolo…
“Tokony hitrandraka izany fototra izany ny vahoaka: entina mampivoatra izany fototra efa ananantsika ny asa ataoany sy ny fananany”, hoy izy. Tsy zava-mandalo ny fanorenana ifotony fa mandavantaona amin’ny fiainam-pirenena izay mifototra amin’ny saim-pirenena.